Mee waan ganama siin jedhe kana Jaallawaniif dabarsi. Yoo dandahamee miseensi WBO tokkoon tokkoon isaa utuu dubbisee gaarii dha |
Home Afaan Oromoo Mee waan ganama siin jedhe kana Jaallawaniif dabarsi. Yoo dandahamee miseensi WBO...
Mee waan ganama siin jedhe kana Jaallawaniif dabarsi. Yoo dandahamee miseensi WBO tokkoon tokkoon isaa utuu dubbisee gaarii dha.
Via Tolera Abera, Guraandhala 23, 2019
This is what waiting WBO after celebration ends in two or three months. OPDO will punish any dissent with different views. Read the brewing hatred and inflammatory words of Addisu Arega against WBO.
Filmaata Dhuunfaa Miseensota WBOf
WBO amma haala jijjirama biyyattii keessatti argameen filmaatni isinii dhihaate. Akka dhuunfaa keessaniitti maal filattuu? Jireenya Bosona Oromiyaa moo Kaamppii OPDO fi Mootummaa Itiyoophiyaa waliinii isinii wayya? Kuni murtii dhuunfaa akka nam tokkootti filattan. Garuu utuu filmaata kee hin godhiin waan armaa gadii hubatteettaa laata?
1. Jireenya Bosona Oromiyaa
Bosona keessaa waggaa hedduu jiraachuun ulfaataa dha. Kana isin caalaa namni beekuu hin jiru. Garuu Oromoon waan qabu isinii laataa. Aannan, Damma, Buddeena, Caccabsaa, Cumboo, Cororsaa, Laaffisoo, Cuukkoo, Qoccoo, Akkawwii, Buna, wkf. Kan qabus qalee isin nyaachisa. Oromoon, bobaa isaa jalatti diina jalaa isin dhoksa, isin jaallata, isin kabaja, rakkina isaa isinitti himata, abdii isaa isini godhata, ijoollee keenya isiniin jedha, dhala isaa waliin qixa isin ilala.Yeroo tokko tokko dabarsee isin kennuurra ofii uf kenna, maatii isaa facaasee hidhama ykn du’ee bada. Haa ta’uutii WBOn bilisummaa saba keessaniif jettanii rakkina jajjabduu keessa jiraattu; duutis akka isin eeggatu ni beektu. Garuu abdii sabaa taatanii utuu kabajamtanii Bosona Oromiyaa keessatti wareegama seenaa qabu wareegamtu. Duuti kun du’a seenaa qabuu dha.
2. Jireenya Kaamppii OPDO fi Mootummaa waliinii
Abbootii Gadaa fi manguddoon isin kabajanii isinitti dhufanii galaa isiniin jechaa jiru. Hanga qawwee keessan itti kennitanitti kabajaa guddaatu isinii kennama; goota keenya jadhamtanii faarfamtu; simannaan addaa (Special Ceremony) isiniif godhama; kormi isinii qalama; Abbaan Gadaa (ayyaantuun) isin eebbisa; media irratti ibsa kennitu; harki isinii rukutama; guyyaan guyyaa gammachuu guddoo isiniif taati.
Gaafa qawwee lafa keessanii kaamppii OPDO galttan hiriiraan nyaattu (shuuroos ta’uu dandaha); leenjiin qondaalota OPDOtiin isiniif kennama; OPDOn akka gaariitti isini barsiifti ( jaallan Ardayitaa qubatan irra caalaa isinii ibsu). Gaafa leenjii fixxan ajajootni WBO hangi tokko (warri carraa argatan) qondaalota OPDO jalatti ramadananii hojjetu. Miseensotni WBO warri carraa argatan hujii waardiyyaa fi hujii humnaa adda addaatti ramadamu. Kunis Itiyoophiyaa guutuu keessatti akka facaatan isini taasisa. Gondor, Goojjam, Tigray, Kambata fi Walayita keessa facaatanii hojjettu. Afaan Amaraa barachuun dirqii ta’a. Warri biyya Tigreetti ramadame Tigiriffaa barachuu dirqii ta’a. Abbaan carraa hujii kanaayyuu dhabe warra isaatti gala, warri isaa yoo jiraatan? Yoo lafa argate qotatee OPDOf gibira kafalee jiraata.Yoo lafa dhabe ykn hujii dhabe harka namaa ilaalee jiraata. Guyyaa rabbi jedhe ni duutu. Garuu duuti inni kunii fi kan Bosona Oromiyaa keessatti ta’u adda adaa. Duutii inni kuni seenaa hin qabu.
Bakka hojjetu ykn jiraatutti yoo waa’ee mirga kee dubbate jaarmayaa shororkkeessa keessatti qooda fudhattee nama ajjeesaa turte jedhamtee kasassamta, mana hidhaa seenuu dandeessa. Achittis dhukubaan ykn shiraa addaa addaan du’uu malta (Duutii inni kunis seenaa hin qabu).
Hub: Miseensi WBO hundi amantaan inni bilisummaa Oromoo irratti qabu waan hin jijjiramneef dhaloota haarawaa summeessa jedhanii amanu warri habashaa fi kitilaayyoon isaanii. Kunimmoo Itiyoophiyaa guddittiif waan sodachisuuf saba jarri kun saba keessaa qulqullaawuun tokkummaa Itiyoophiyaaf wabii ta’a jedhanii amanu. Egaa namni silaas lafa kanarra ni jiraata, ni du’as. Kanaaf WBO akka dhuunfaatti jireenyaa fi du’a isa kami filattaa?
a. Bosona Oromiyaa?
b. Kaampii OPDO/ mootummaa Itiyoophiyaa?
Previous articleWBO: Irra Guddaa Shororkeessaa Taphaa Kan Jiru Motummaa dha
Next articleDaniel Dafa – on current encampment in Oromia